लम्साललाई स्पष्टिकरण सोधिनु लोकतन्त्रको उपहासः उपाध्यक्ष पोखरेल « Farakkon
लम्साललाई स्पष्टिकरण सोधिनु लोकतन्त्रको उपहासः उपाध्यक्ष पोखरेल
दाङ, बैशाख १६ ।
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विपुल पोख्रेलले रेडियो नेपालका कार्यक्रम प्रस्तोता डा. नवराज लामिछानेलाई स्पष्टिकरण सोधिनु लोकतन्त्रको उपहास भएको बताएका छन् ।
रेडियो नेपालको सोमबार बिहानको सम्वाद कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईसँगको अन्तरवार्ता लिएका प्रस्तोता डा. लम्साललाई सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्पष्टिकरण सोध्नुले सम्पादकीय स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको खिल्ली उडाएको उनले टिप्पणी गरे ।
कुनैपनि लोकतान्त्रिक समाजमा कुनैपनि अन्तरवार्ताकारले अतिथिलाई पहिले नै यस्तो भन्नु भन्ने प्रचलन संसारमा कहीपनि नभएको भन्दै उपाध्यक्ष पोखरेलले पछिल्लो घटनाक्रमले सरकार नियन्त्रित शैलीमा अगाडि बढेको स्पष्ट हुने बताए ।
उनले आफ्नो आलोचना सुन्नै नचाहने प्रबृत्ति त्याग्न आग्रह पनि गरेका छन् । सञ्चारमाध्यम सार्वजनिक सम्पत्ति भएको हुँदा त्यसमा सबैका अभिव्यक्तिलाई स्थान दिनुपर्ने उनको तर्क थियो ।
‘रेडियो नेपालले माफी माग्दै वक्तव्य निकालेको घटना झनै खतरनाक छ’ पोखरेलले भने ‘दवावमा यस्तो बक्तव्य आएको हो कि चाकरीको पराकाष्टा हो ? भन्ने प्रष्ट गर्नुपर्छ ।’ रेडियो नेपालको प्रशासनले आफ्नो विवेक र घोषित नीतिअनुसार काम नसकेको स्पष्ट भएको पोखरेलले दाबी गरे ।